1 Enwere m ike Naghachi Data si Draịvụ bụghị Initialized?
Ndewo, taa mgbe m plugged na WD mpụga HD, ọ mere na-egosi n'okpuru kọmputa m. M gara ego disk management na a gwara m na HD bụ uninitialized. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma tupu na m nwere mkpa data na ya. Bụ n'ebe ọ bụla otú ahụ ka m nwere ike naputa data enweghị initializing disk?
Ị ga-nnọọ iwe mgbe ọ hụrụ na ozi "Unknown, bụghị initialized na Unallocated Ngwaọrụ" na kọmputa gị. Ị na-enweghị ụzọ nweta draịvụ ike gị ma initializing draịvụ ike gị. Ị na-atụ ụjọ nke adịkwa niile dị mkpa data na na uninitialized ike mbanye. Ma nke bụ eziokwu bụ i nwere ike gbapụta gị niile data tupu ị na-ekpebi initialize ya. Kedu? Ị dị nnọọ mkpa ihe uninitialized disk data mgbake usoro.
A bụ m nkwanye: Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac. Ọ nwere ike ịbụ gị mma nhọrọ naghachi data si uninitialized disk. Na ya, i nwere ike naghachi fọrọ nke nta niile dị iche iche nke faịlụ site na gị uninitialized disk na ihe mgbalị na n'ihe ize ndụ-free ụzọ, gụnyere photos, videos, akwụkwọ, ọdịyo faịlụ, faịlụ ederede na ndị ọzọ.
Download a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery naghachi data enweghị initializing disk ugbu a!
2 Igosi Uninitialized Disk Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Ihe mbụ mbụ: Iji naghachi data si uninitialized disk, biko adịghị Ọkpụkpọ ma ọ bụ initialize gị disk mgbe ị na-ahụ njehie ozi dị ka "Raw mbanye na-adịghị initialized", "Format Drive" na "Drive-apụghị enweta", na kọmputa gị. Nke a dị ezigbo mkpa n'ihi na-ezere data overwritten na draịvụ ike gị.
Ugbu a ka na-amalite na data mgbake on Windows kọmputa.
Nzọụkwụ 1 Họrọ "nkebi Iweghachite" mode na-amalite
Ẹkedori Wondershare Data Naghachi maka Windows na kọmputa gị, na mgbe ahụ ị ga-ahụ a mmalite window na 3 mgbake ụdịdị.
Ebe a, na-agbake data si uninitialized disk, ka họrọ "nkebi Iweghachite" dị ka a na-agbalị. Nke a mode-enyere gị aka naghachi data si partitions na gị uninitialized disk.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị uninitialized ike mbanye
Ugbu a mkpa ka ị họrọ draịvụ ike gị na pịa "Ekem" ka iṅomi partitions na ya.
Ebe a niile partitions na gị uninitialized disk ga-achọpụtara na depụtara. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ otu ị na-aga na-agbake na pịa "Malite" ka iṅomi furu efu data.
Nzọụkwụ 3 Naghachi data enweghị initializing disk
Mgbe scanning, niile recoverable faịlụ gị uninitialized disk ga-gosiri na window. Ị nwere ike ịlele otú ọtụtụ faịlụ na na disk nwere ike natara site faịlụ aha.
Na njedebe, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ data gị mkpa ma pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
ThinkPad Data Recovery: Olee naghachi Data si ThinkPad Akwụkwọ ịde
Olee otú ịrụ a SSD data mgbake na ala?
Olee otú Igosi Fuji Photo Recovery (Fuji FinePix HS10 / HS11)
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Data si Uninitialized Disk